IATA: Be pitsiny loatra amin'ny fomba hisokafan'ny sisintany indray
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » IATA: Be pitsiny loatra amin'ny fomba hisokafan'ny sisintany indray » Page 2
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Fitantanana risika tsotra
Ny fanadihadiana vao haingana momba ny tsena fitsangatsanganana 50 an-tampony, mitaky ny 92% -n'ny fifamoivoizana manerantany, dia nanambara fa ilaina maika ny fanamorana ireo fepetra isan-karazany ampiasain'ny governemanta hitantanana ny loza mety hitranga amin'ny COVID-19.
“Be loatra ny fahasarotana amin'ny fomba hanokafana ny sisintany. Ny mety hisian'ny fifandraisana indray manerantany dia mety hosamborin'ny biraon'ny birao izay manome vahaolana mitokana ao an-trano "noho ny fomba fiasa izay miasa manerana ny sisintany," hoy i Walsh.
Ireto misy ny valin'ny fanadihadiana:
Vitsy ny fanjakana tena misokatra:
Amin'ireo fanjakana 50 nohadihadiana dia 38 no manana fameperana COVID-19 izay afaka miditra. Fito ihany no tsy nanana fameperana fidirana na fangatahana quarantine rehefa tonga. Ny dimy hafa dia tsy manana famerana fanampiny amin'ny hoe iza no afaka miditra fa mitazona fepetra quarantine ho an'ny sasany aorian'ny fahatongavany.
Tsy misy fitoviana eo amin'ireo fanjakana 38 izay mitazona ny fameperana fidirana:
Fanjakana roapolo no madiodio na vinavina amin'ny fameperana amin'ny endrika isan-karazany ho an'ireo mpandeha vaksiny, fa
Enina ihany no voamarina fa tsy ampy taona ny zaza tsy ampy taona (izay tsy afaka atao vaksiny amin'ny ankamaroan'ny tsena) rehefa mandeha miaraka amin'ny olon-dehibe vita vaksiny izy ireo. Ary tsy misy fitoviana amin'ny famaritana ny taonan'ny zaza tsy ampy taona.
Fanjakana sivy no tsy manaiky ny lisitr'ireo vaksinin'ny OMS.
Misy famaritana dimy farafahakeliny farafahakeliny ho an'ilay teboka aorian'ny fampidirana an-tsokosoko izay heverina fa mahomby ny vaksinina.
Tsy misy fifanarahana momba ny faharetan'ny vanim-potoana manan-kery ho an'ny mpandeha iray hoheverina ho vaksiny.
Fanjakana efatra ihany (Alemana, France, Suisse ary Austria) no manaiky ny tsimatimanota vokatry ny aretina COVID-19 teo aloha izay mitovy amin'ny vaksiny
Tsy misy fitoviana amin'izay ilaina hanaporofoana ny aretina taloha.